A ukushisa for Ukushisa eqakathekileko yanoma yiziphi isibilisi. Kusukela kahle kwawo kuxhomeke kulokho "ukuphila" Ukushisa iyunithi. Ake sibheke umzimba ukushisa uhlelo Ukushisa kuzoqinisekisa ukusebenza ngempumelelo kubhayela futhi baphile isikhathi eside service yayo.
Yiziphi amayunithi yalo mkhakha?
Plate ukushisa for Ukushisa - uhlelo uyinkimbinkimbi ngawo amandla idluliselwa phakathi kokupholisayo ashisayo nabandayo. In practice, lokhu isicelo liquid umusi, ingaphezu ezingavamile - igesi, eziyisisekelo okuqinile.
Ngamanye amazwi, lo Ukushisa ukushisa - idivaysi akanayo siqu lwaluvelaphi ukushisa, nokusebenza yayo bunikezwa amandla ukuthi livela central bafudumale system. Okungukuthi, kubhayela noma kuhhavini asisebenzi amayunithi kulesi sigaba definition. Nokho kusofa noma isihlangu ibonisa ukuthi ukushisa yamagesi flue kusukela isitofu, a umzimba ukushisa kungase kubhekwe njengokwelapha izibonelo ngoba kwenzeke ngokubeka amalahle emoyeni egumbini.
Nekusebenta yokudlulisa amandla luncike ezilandelayo:
Izinga lokushisa umehluko phakathi ezindaweni (khona umehluko okuphawulekayo omkhulu yokudlulisa amandla).
Imininingwane endaweni nge ukushisa ezindaweni ehlukile.
Izinkomba conductivity ezishisayo impahla isakhiwo yokukhiqiza.
Empeleni, umzimba ukushisa ukuze amanzi ashisayo kusukela Ukushisa kungenzeka emelelwa iyiphi ipayipi esisetshenziselwa adlulisa ethile yokusebenza imvelo ukuthi izinga lokushisa ezahlukene kusukela indices of Isikhala ezungezile.
Omunye nenqubo ebalulekile Ukukhethwa umzimba ukushisa okuthile cebo akuyona kuphela ubunjalo Isibandisi, kodwa futhi izinga layo. Lapho othile osebenzelana ukusebenza okufanele zisebenzisa amanzi othambile amakhemikhali noma ukuhlanzwa, kangcono makudle lamellar izakhiwo uhlobo brazed. Kuyefana nasendleleni ukusetshenziswa coolants ukuthi musa siyekele iyiphi ezifakwa kwi izindonga isakhiwo, afana notshwala, Freon noma ethylene glycol.
Uma kuziwa emikhulu izinto ezishisayo ezifana boilers, ngokuvamile kungenzeka ukubona umzimba ukushisa ukuze amanzi ashisayo Ukushisa kusuka uhlobo egoqekayo. Ukusetshenziswa izixazululo ezinjalo zingachazwa ngezinqubo khona yekhwalithi ephansi zokusebenza imvelo ukuthi isetshenziswa central Ukushisa amanethiwekhi.
Lula design gasketed ipuleti lokubolekwa ikhuthaza ukuzilondoloza elula, ikakhulukazi disassembly okusheshayo lapho descaling kudingekile iziteshi yangaphakathi. Kulokhu, esikhundleni izingxenye umzimba ukushisa okunjalo, kungakhathaliseki Flanges noma ama-valve, kungenzeka ngisho abaculi ongenalwazi.
Ngokusho indlela amandla ukudluliswa ukunikeza kuhlangana kanye umzimba ebusweni ukushisa for bafudumale. Umsuka usebenza ngokuvumelana nesimiso eneji asakazwa ukuxhumana ngqo phakathi ngabanye ukushisa zenethiwekhi. Uhlobo lwesibili idlulisela amandla ngokusebenzisa ipuleti ngaphandle ukuthintana ngqo izindawo zokusebenza.
Uma kubalulekile ukusebenzisa umzimba ukushisa for Ukushisa njengoba isici for amalahle amanzi echibini noma njengendlela refrigerant ukufaka zezimboni, asetshenziselwe le nhloso kunconywa ipuleti solder lokubolekwa. imiklamo okunjalo vumela ngokushesha sifinyelele ephumelela kunazo ukudluliswa ukushisa phakathi uketshezi ezimbili.
Ukushisa for amalahle endlini zingenziwa ngensimbi noma waphonsa yensimbi amapuleti zixhunywe zethusi nokunamathisela ngomthofu noma nickel solder. Design, ithusi soldered, ezivamile amasistimu wokushisa. Ngesikhathi esifanayo, yezingxenye uhlelo axhunyiwe usebenzisa nickel, isetshenziswa ngokuyinhloko for nezidingo izindawo zezimboni, futhi kudingekile ngabezindaba amakhemikhali nolaka uma.
Ngenxa yokukhetha cast iron ukushisa kufanele sinake amaphuzu amaningana:
isisindo Kunalokho umxhwele, okuyinto ngempela okufanele sicabange ngazo lapho ukuklama iphrojekthi ngamalungiselelo egumbini kubhayela. Ngokuphathelene ukuqaliswa izakhiwo ezinjalo lobumfihlo ekhaya bafudumale system, lona wamuva kumele kube izingxenye ezihlukene nomqulu omncane, isilinganiso esiphansi iziteshi intuthu, ezisetshenziswa ukuthutha imikhiqizo amandla omlilo.
Sakaza yensimbi lokubolekwa kuhluke kungenzeka Sectional yamila umbono ezokuthutha, okuyinto kuba esilungele ukufakwa kanye nokugcinwa okwalandela.
Naphezu esinzima okokusebenza ngempela enhle. Ngakho-ke, ngesikhathi yezokuthutha ukufakwa yini edingekayo ukuze ugweme ukucindezeleka mechanical phezu timphawu tesakhiwo. Enye ingozi - ukushaqeka ezishisayo. Ngo abukhali iyunithi zasendlini akuyona selehlile ivolumu enkulu abandayo zokusebenza uketshezi, izindonga ukushisa anganika ufa.
Iron amenable ukugqwala kokubili ezimanzi futhi omile. Kumiswa wokuqala ngokudalula esidi condensate impahla. Okwesibili kancane ihlanganisa ebusweni isakhiwo njengoba ifilimu nokugqwala inqubo wokusebenza. Njengoba kwabebhange ukushisa for Ukushisa a bathinteka indlu yensimbi ifa izindonga awugqinsi, lezi zinqubo ingase ihlale iminyaka eminingi.
izinhlelo ezinjalo abathukuthelela isikhathi eside, kodwa kancane kakhulu kuphole, okuyinto iyehlisa petrol futhi kukhulisa nekusebenta isikhala bafudumale.
Ukuba khona steel "inhliziyo" aliholeli ephawulekayo silinganiso uhlelo. Ngakho-ke, umzimba ukushisa amanzi Ukushisa, wenza lezi zincwadi ngokuvamile sisetshenziswa ukusevisa izindawo ezinkulu.
Njengoba for the lula inhlangano steel isakhiwo, inhlangano yokugcina, ngokungafani cast iron amayunithi, kuthatha indawo kule mboni. I monoblock eyodwa isiqeshana kunzima ngempela ukubeka amakota eduze. Ngaphezu kwalokho, i-pre-ababebuthene eziningana ukulungisa kuyinkimbinkimbi kanye nokugcinwa kohlelo.
Kufakiwe steel ukushisa somlilo Ukushisa, okuyinto zaphazamiseka kakhulu, kuba cishe engenakwenzeka ukuba ababuyisele ekuphileni ekhaya. Kuphakathi kufanele abalekele Ukudilizwa okuphelele kohlelo nabanye futhi wathumela kuJehowashi ukulungisa esimila zezimboni, noma ukuqeda izakhiwo, egcwalisa esikhundleni salo.
Ngesikhathi esifanayo ukushisa namanzi umzimba ukuze bafudumale we steel akesabi iyiphi ukushaqeka ezishisayo noma imithwalo abalulekile lokukhanda. Indaba ine isilinganiso eliphezulu eguquguqukayo kanye ke ubhekana lo ngokuzumayo lokushisa izinguquko. Nokho, nge ukuvezwa kwesikhathi eside ukubanda okwedlulele noma ukushisa ukuze welds zingase zimiswe ukuqhekeka okuncane.
Uma sikhuluma ikhono simelane ukugqwala, steel ukushisa kungaphansi amathonya electrochemical kuphela. Ikakhulukazi ngokushesha nge contact isikhathi eside nge ezindaweni ezinodlame nokugqwala konakalisa izindonga mncane. Kulesi ukuphila kohlelo kungenzeka kancane kancane wehlise isikhathi kusukela eminyakeni emi-5 kuya ku-15. Zivela lokhu, abakhiqizi ngokuvamile amboze izindonga engaphakathi cast iron steel ukushisa.
Isimiso Sokuthungatha le nto ngokuphazima kweso kulungele futhi kudambe ngokushesha nje. Naphezu kalula okusobala isidingo Ukushisa okusheshayo izakhiwo, mhlaba kuphambene, ohlangothini ezimbi. Ngakho, umphumela yokukhathala metal ezigabeni design kungaholela ukubukeka izilonda ezincane.
Indlela yokwenza ekubalweni umzimba ukushisa?
Buciko sokuzihlola komfundi ingenye imibuzo ezivame kakhulu kubasebenzisi. Empeleni, ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi umsebenzi kunzima kakhulu, kusukela abakhiqizi ukushisa ozama yokufihla izimfihlo entfutfukweni yabo kusukela ngaphandle, kuhlanganise kubasebenzisi.
Ngesizathu ngenhla, kuba nzima ukuthola real energy ukusetshenziswa yokudluliswa ukushisa. Uma lesi sibalo ngokuqinisekile ongaphakeme, ngokulandelana, nekusebenta ukushisa alwanele ukuhlangabezana nezidingo ezikhona.
Ukwandisa ukusebenza uhlelo, ngokuvamile udinga ukusetha ivolumu amayunithi. Nokho, ukunciphisa inani ukushisa amapuleti zisetshenziswa, lwanele ukusebenzisa uhlelo ukubala ekhethekile, elitholakala nomkhiqizi ngamunye ugesi technology ezinkulu.
Ukushisa for amalahle izandla zabo
Njengoba umkhiqizo design sakhe ngempumelelo ezokwenza sibhekane ngokuphumelelayo imisebenzi ukudluliswa ukushisa? Kuyinto ngokwanele ukuba babuyele yencazelo, okuyinto ejwayelekile kulesi sigaba sama-kumadivayisi. It kuvela ukuthi umhlangano okulula kwensimbi ukushisa tube kwanele ukuthatha obuphelele roll ezithile kube indandatho futhi ibekwe endaweni esitsheni wawugcwalisa ngamanzi.
Ngenxa outputting okukhiphayo nokokufaka ipayipi Ungamukela design obusebenzayo, okuzokwenza noma ukushisa noma kuphole uketshezi ukusebenza, kuye ngesidingo ekhona.
Ukushisa "ibhantshi amanzi"
Ngaphezu uhlelo ngesimo ikhoyili, lo umzimba ukushisa zingenziwa mathupha, eyaziwa ngokuthi "amanzi ijazi". izinhlelo ezinjalo usebenze esekelwe ukusatshalaliswa amandla isimiso iziqukathi eziningana uphawu afakwe nomunye.
ukudluliselwa Heat ngalendlela siye sasetshenziswa wosayizi omncane fuel boilers okuqinile ngempumelelo. Naphezu inkimbinkimbi design jikelele, kusimo amasistimu sinjalo ukhona iphansana yokusebenza ingcindezi, ebalwa kuzilinganiselo idatha. Ngaphezu kwalokho, womshini ukushisa ezisebenza "amanzi ijazi", kumelwe abhekane i UWelder abanolwazi. Nokwakha uhlelo ezinjalo kusukela materials ngakwesokunene, ngingabazi afaneleyo, ke kuyinkinga ngokwakho.
Ukushisa "tube ishidi"
Mhlawumbe kunzima kunayo yonke ongakhetha self-ukukhiqizwa, lihlelo, okuthiwa "tube ishidi". Lenchazelo iba yimali yesinqumo esingashintshi kwabebhange okuzenzela aqukethe inani ugingqe obuphelele ipayipi ukuxhumana.
amayunithi okunjalo zivezwa amathangi ezintathu evaliwe. Ababili babo zitholakala emikhawulweni okuphambene isakhiwo futhi axhunyiwe nge metal babashayeli uketshezi ukusebenza ukuthi wawanda imikhawulo izitsha ezinjalo. Heat exchange wenziwa eyesithathu - maphakathi - ohlangothini ngenxa ukufuduka ketshezi naphakathi zokusebenza phakathi amathangi ngokusebenzisa amapayipi.
Ngo ukufuna amakhambi okunye
Uma kungekho amathuba self-inhlangano yabantwana bakwa-ukushisa ngu zindlela ezingenhla, ungazama ukuthola izinto kusistimu esizayo ekamelweni lakho siqu noma landfill. Ngokwesibonelo, isixazululo enkulu ukwakha idivayisi ngesimo ikhoyili siba ithawula wesitimela ubudala. Fit njenganoma yikuphi kurediyetha yasendlini ongenawo ukuvuza.
Ngokuqondene isicelo radiators yezimoto Ohhavini, eqinisweni, kungaba ngokushesha lisetshenziswa njengedivaysi Ukushisa isici, ngokuhlanganisa ngabanye amayunithi adapters ukwandisa endaweni ezishisayo amandla exchange.
kudivayisi Ngempumelelo kungadalwa esekelwe ubudala ikholomu ashisayo-amanzi. Kulokhu, ungenawo ngisho babe lutho ukuze ashintshe.
Njengoba singabona, isimiso yokusebenza kwabebhange ukushisa imayelana ngokufanayo kuyo yonke indawo. Kuye ngokuthi izimo yokusebenza lokubolekwa ezinjalo ongasebenza kokubili amalahle kanye lwaluyophola naphakathi ezisebenza: igesi, okuluketshezi noma okuqinile.
Lapho ekhetha izixazululo ifektri kuxhomeke kakhulu imisebenzi aphathiswa umzimba ukushisa, njengoba kwaba njalo endabeni ka-self-inhlangano - kusukela umcabango ziyinkosi ubunjiniyela sika.
Boiler "Beretta": izinhlobo, izici, isitshalo
Indlela ukupheka izimfanzi e multivarka?